China High arụmọrụ crankshaft roba mmanụ akara maka TC mmanụ akara 09283-32022 ụlọ ọrụ na-emepụta | Xinchi
High arụmọrụ crankshaft roba mmanụ akara maka TC mmanụ akara 09283-32022
OE Mba.: 09283-32026 / 96051420/91120283/94535472 / 09283-32025 / 91120284 / 09283-32003 / 09283-32002 / 09283-320116 / 09283-32022 / 81-53236-00
N'èzí: 47 mm
OE Mba. 09283-32026 / 96051420/91120283/94535472 / 09283-32025 / 91120284 / 09283-32003 / 09283-32002 / 09283-320116 / 09283-32022 / 81-53236-00
Nha Obosara: 32mm
N'èzí: 47 mm Elu: 8mm
Ihe onwunwe Ọla shea tinye eke roba
Agba Black ma ọ bụ aja aja, ma ọ bụ dị ka gị chọrọ.
Kwụ ụgwọ okwu T / T, Western n'otu ma ọ bụ dị ka chọrọ
Oge Mbuga ozi 5-10days na ngwaahịa, 5-30days maka mmepụta deatials na iji ibu
Ngwa IHE MATIZ, KALOS, SUZUKI
Emebere TC Oil Seal iji gbochie mmiri na unyi.
Na roba ntekwasa n'èzí dayameta emepụta kacha akara ke ehiwe.
Ngwongwo ihe nchara nke nchara na-ekwe nkwa nrụgide mgbe niile na axle axle na ndụ nke akara.
Ọ dị mma iji dochie akara mmanụ gị mebiri emebi.
Ọ nwere ike igbochi ájá na adịghị ọcha n'ime igwe, ma gbochie mmanụ na-ete mmanụ ịpụpụ.
Ejiri ezigbo ihe eji eme ya na akara siri ike.
Na-ebelata ọnọdụ ọrụ, iyi na esemokwu.
Ike ọgwụgwụ na-eguzogide ọgwụ na-eyi na-eguzogide ọgwụ, iji hụ na ezigbo onye na-arụ ọrụ nke ọgba tum tum.
Ọma igbochi mmanụ wụfuru na nche megide unyi na ndị ọzọ.
Mfe wụnye, ọ dịghị mgbanwe dị mkpa.
Akara siri ike na-enye ndị na-agba ịnyịnya njem dị mma.
Akara mmanụ, nke a makwaara dị ka akara aka, bụ akara akara egbugbere ọnụ nke radial bụ nke a na-ejikarị eme ihe iji jigide ndị na-ete mmanụ na akụrụngwa nwere ntụgharị, na-agbanwe ma ọ bụ na-emegharị. Ngwa ngwa ọrụ na-agbanwe agbanwe na-adịkarị.
Ihe mkpuchi mmanụ na-ejikarị ihe atọ dị mkpa: ihe nrịba akara, eriri ọla na mmiri. Ebumnuche nke ihe akara ahụ bụ iji kwụsị mmiri si na-agba n'etiti etiti na ụlọ. Ngwurugwu ọla ahụ ga-enye nkwụsi ike na ike maka akara mgbe a na-ejide ya na bore ma ọ bụ recess reo. Mmiri garter na-eme ka nrụgide na-adịgide adịgide ma na-ejigide ike radial na shaft ahụ, na-eme ka ọnụ ọnụ akara ahụ dị na obosara akọwapụtara. Garter spring na-ejigide ike radial nke egbugbere ọnụ akara na-arụ n'akụkụ elu osisi ahụ. A ghaghị ịhọrọ ihe niile dabere na gburugburu ebe mmanụ mmanụ ga-arụ ọrụ.
Arụ ọrụ nke akàrà ndị a na-adabere n'ọtụtụ dị ukwuu na ibu ọrụ kwesịrị ekwesị nke a na-echekwa na interface akara akara. Akara ndị a na-eguzogide nrụgide nke 15PSI na ọrụ ha na-adabere na ntinye dịka oghere nke ọkpọ, ọsọ ọsọ, ọnọdụ ọrụ, ọnọdụ ọrụ, wdg.
Nke gara aga: Ngwaahịa kachasị ere AH8846G, 8-94235-369-0 4JA1 4JB1 Nkpuchi mmanụ akara 95 x 118 x 10
Osote: Usoro Ntanetị 2L 3L Auto Part Rock Valve Cover gas maka Toyota HILUX 2.4 D 11213-54050